Juggernaut, Sphinx na Ọnọdụ: Mmasị ozi ngwa ngwa ngwa ngwa Site na Linux
N'ịga n'ihu na okwu ejiji na nke ugbu a na ụzọ ọzọ enwere ike iji ngwa ngwa ozi ngwa ngwa WhatsApp, taa anyị ga-eweta 3 na-adọrọ mmasị emeghe isi nzi ozi ngwa ngwa.
Ha bụ Juggernaut, Sphinx na Ọnọdụ, na ọ bụghị naanị na-enwe mmasị na-adọrọ mmasị dị ka ngwa izipu ozi, mana dị ka usoro ma ọ bụ pụtara ugwo, ebe ọ bụ na ha dabere na ya teknụzụ blockcheni.
Ọ bụ ezie na ndị a ọhụrụ 3 ngwa ọdịnala na-ewetara ndị si oghe emeghe, ihe na-adọrọ mmasị bụ iwu ya n'okpuru Nka na ụzụ Blockchain. Agbanyeghị, maka ndị chọrọ ịchọpụta ụzọ ndị ọzọ na-anaghị etinye na teknụzụ a, anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ gara aga anyị na-akwado ịgụ mgbe ọ gwụchara:
"Ngwa nkwukọrịta ma ọ bụ nyiwe emeela ka ikwalite nkwukọrịta nke mmadụ na mmadụ ma ọ bụ nke etiti, na-aba oke uru site na ikwe ka nkwukọrịta dị mma na nke ọma dị n'etiti ha site na ebe ọ bụla na mbara ụwa nwere ohere ịntanetị na ezigbo oge site na ọtụtụ ọwa nkwukọrịta." Nkwurịta okwu: nyiwe maka GNU / Linux Operating Systems.
1 Ngwa ngwa ngwa ngwa na Teknụzụ Blockchain
1.1 Gịnị bụ Juggernaut?
1.2 Gịnị bụ Sphinx?
1.3 Gịnị bụ Ọnọdụ?
Ngwa ngwa ngwa ngwa na Teknụzụ Blockchain
Gịnị bụ Juggernaut?
Dị ka Juggernaut ebe nrụọrụ weebụ, a kọwara ya dị ka:
"Otu ngwa ngwa ngwa ngwa na-echetakwa otu anyị si eziga ozi, na-eji usoro nzuzo na njedebe, na-agagharị na netwọk yabasị, nke na-eme ka ọ ghara iguzogide nyocha, ma na-enye usoro izi ozi nke ọma na usoro ịkwụ ụgwọ site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Kedu ihe kpatara Juggernaut ji karịa naanị ngwa ngwa izipu ozi ozugbo, ebe ọ na-enye ndị ọrụ ya ohere ịnụ ụtọ ikike niile nke Bitcoin na Lightning Network nyere."
Obi uto ngwa ngwo ngwo dị ugbu a na Windows, Mac OS na Linux. Na nhazi faịlụ ntinye na-abata Ọkpụkpọ ".AppImage". Na mgbakwunye, ndị mmepe ya na-ekwe nkwa na ọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya maka nyiwe sistemụ arụmọrụ sistemụ. Na maka ozi ndị ọzọ gbasara ihe niile maka gị budata ma tinye ị nwere ike ịga leta gị gọọmentị webụsaịtị na GitHub.
Gịnị bụ Sphinx?
Dị ka Ebe nrụọrụ weebụ Sphinx, a kọwara ya dị ka:
“Ngwa izipu ozi ozigbo nke na-aga n’igwe Lightning Network ma jiri TLV ziga ozi n’elu ya. Nke pụtara na ozi ọ bụla bụ ịkwụ ụgwọ zitere site n'aka onye ọrụ ọzọ. Kedu nke pụtara, na ozi ọ bụla chọrọ micropayment nke na-eme ka o doo anya na ọnụ ọgụgụ na-aga ozi ha. Ọ bụrụ na ejiri sava ndị ọrụ, a naghị akwụ ụgwọ ahụ ụgwọ, ebe ọ bụ na satoshis anaghị ahapụ ọnụ ha, ọ bụ ezie na ọ nwekwara ike ijikọ ọnụ ya. N'ikpeazụ, n'etiti ọtụtụ uru ndị ọzọ, ngwa ahụ na-akwado nzipu na ịrịọ maka ịkwụ ụgwọ, bi-directionally na okike otu."
Obi uto ngwa ngwo ngwo dị ugbu a na Windows, Mac OS na Linux. Na nhazi faịlụ ntinye na-abata Ọkpụkpọ ".AppImage". Na mgbakwunye, ọ dị maka nyiwe sistemụ arụmọrụ sistemụ, iOS na gam akporo. Na maka ozi ndị ọzọ gbasara ị nwere ike ịga leta gị gọọmentị webụsaịtị na GitHub.
Gịnị bụ Ọnọdụ?
Dị ka Ọnọdụ ukara saịtị, a kọwara ya dị ka:
“Ngwa ngwa ngwa ozigbo, obere akpa mkpuchi na ihe nchọgharị Web3 ejiri teknụzụ kachasị ọhụrụ rụọ. Nke bụ ya mere, ọ ga-atụle dị ka a dị ike ibu ngwa maka onwe na ala nkwukọrịta. Na mgbakwunye, ọ na-eji izo ya ezo na ngwaọrụ nche iji hụ na ozi gị na azụmahịa gị bụ nke gị na nke gị naanị. Ọ na-ebipụkwa ndị etiti iji kpuchido ozi gị na nzuzo yana akụ gị."
Obi uto ngwa ngwo ngwo dị ugbu a na Windows, Mac OS na Linux. Na nhazi faịlụ ntinye na-abata Ọkpụkpọ ".AppImage". Na mgbakwunye, ọ dị maka nyiwe sistemụ arụmọrụ sistemụ, iOS na gam akporo. Na maka ozi ndị ọzọ gbasara ihe niile maka gị budata ma tinye ị nwere ike ịga leta gị gọọmentị webụsaịtị na GitHub.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Juggernaut, Sphinx y Status», 3 na-akpali ngwa ngwa ngwa ngwa emeghe emeghe sitere na teknụzụ blockcheni; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Juggernaut, Sphinx na Ọnọdụ: Mmasị ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa